शास्त्रले रजस्वालालाई नराम्रो भन्दैन, तर हामी किन भेदभाव गर्छौ ? | Hamro Patro
कुनै पनि सनातन शास्त्रले छाउपडीको उल्लेख गरेको छैन् र अलग्गै घरमा राखेर रजस्वालाको समय कटाउन नियम उल्लेख गरेको पाइन्न ।
स्वर्गका राजा ईन्द्रलाई ब्रहमहत्याको दोष लागेको हुन्छ जसलाई कटाउन ब्रहमा स्वयमले भुलोकका महिला, बृक्ष अनि पानीमा बराबरी बाँडेका कथन छ । यसैकारणले पानीमा भुमरी र एकआपसमा पानीका वहाव ठोकिएपछि फिँज उत्पन्न हुने, सुख्खा ठाँउमा उम्रिने बृक्षहरु जस्तै सल्ला लगायतका रुखवाट खोटो निस्कने र महिलाहरुमा मासीक रजोदर्शाना हुने गरेको कथन छ। कथन र कथाहरुले जे भनुन, रजस्वालालाई दोष भन्दा पनि एउटा अत्यन्त पुण्य शक्ति र जग अनि श्रृष्टिको आधारका रुपमा हेरिएको छ ।
रजस्वालालाई रजोदर्शना पनि भनिन्छ, संस्कृतमा रजोदर्शाना अर्थात रज भनेंको रगत र दर्शना भन्नाले देखिनुलाई सम्मानजक रुपको अभिव्यक्त गरिएको हो । रज अर्थात रगतमा प्राण वायू अनि प्राणको संभावना रगत भएका कारणले रगतलाई राजसी तत्वका रुपमा पनि लिइन्छ । राजसी भन्नाले अत्याधिक रजशर्भ शक्ति भन्ने बुझिन्छ तसर्थ रजस्वालाका समयमा अत्याधिक शक्ति वहन हुने र संबेदनशील समयकारुपमा परिभाषीत गर्न सकिन्छ ।
चाण्क्य नीतीलाई यहाँ उदृत गर्न चाहन्छौं
भस्मना शुद्धयते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्धयति। राजसा शुद्धयते नारी नदी वेगेन शुद्धयति। अर्थात पीतललाई खरानीले शुद्ध गर्न सकिन्छ, तामालाई अमिलोले शुद्ध गर्न सकिन्छ अनि महिलाको ४ दिने रजस्वाला समापन भएलगत्तै शुद्ध हुन्छिन् । अब यहाँ एउटा प्रश्न आँउछ, के यी ४ दिनको समयमा महिला अशुद्ध या दोषी हुन्छन त ? के यहि दोषका कारणले नै उनिहरुलाई छुवाछुत गरिएको हो त ?
उपयूक्र्त श्लोकले महिलाको शुद्धिकरणका कुरा गरिहँदा ४ दिनमा अशुद्ध र दोषी हुन्छन तसर्थ कामकाज या अरु कुराहरुवाट अलग्ग राखिएको भन्न खोजेका हैनन् । महिलाहरुको आरामका लागि अनि रजस्वालाको समयमा कुनै काम गर्ननपरोस भन्नकालागि ती परिधीहरु सनातन संस्कारले कोरिदिएको हो । महिनावारीको समयमा रक्त निष्काषन हुने र त्यसैसाथ बिभिन्न बिकारहरु पनि निष्कनेहुँदा महिला स्वयमको स्वास्थकालागि र आरामका लागि केही परापूर्व सिमाहरु कोरिएका हुन् जसको तात्वीक अर्थ महिलालाई असम्मान गर्नु या भेदभाव गर्नु कतै छैन्, पछी आएर यी चलनहरुको उल्टो र आधा व्याख्या भएको पाइन्छ ।
कुनै पनि सनातन शास्त्रले छाउपडीको उल्लेख गरेको छैन् र अलग्गै घरमा राखेर रजस्वालाको समय कटाउन नियम उल्लेख गरेको पाइन्न । आधुनिक यूगमा हामी छुवाछुतको समर्थन या वकालत भनें गरिरहेका छैनौं । आफ्नो आहार, बिहार अनि आराम तय गरेर आफ्नो स्वास्थको ख्याल राख्न सक्ने महिलाहरुले छुवाछुतको पछि लागिरहन पर्दैन । शास्त्रले पनि शुद्धता अर्थात सरसफाईलाई मात्र ध्यान दिएको हो ।
महिनावारीको समयमा एउटी आमालाई बच्चासँग पर राखिनु अनि छुन नदिइनु सनातन संस्कार हैन, अमानवीय कार्य हो । तथापि आमाको रजस्वाला चक्र समापन भएलगत्तै बच्चा अनि आमा दुबैले स्नान गर्न भनें जरुरी छ ।
आउनुहोस् अब सोझै बेदका कुराहरु उदृत गरौं र पत्ता लगाऊ के भन्छ त बेदका ज्ञानले रजस्वालाका बारेमा ?बैद्धिक समयमा सनातन महिलाहरु रजस्वाला हुँदा पनि खुल्ला रुपमा मन्दिर या देवालय जाने र
पूजाअर्चना गर्ने गरेको र अहिलेको भन्दा धेरै स्वतन्त्रता रहेको कुरा कश्यप बेद अध्यन सस्थाँ
भारतका बिभिन्न अध्ययन अनि शोधमा उल्लेख गरिएको छ । आजपनि धेरै आमाहरुले नै आफ्ना छोरीहरुलाई महिनावारीका समयमा मन्दिरमा नजान अनि पूजा आजा नगर्न भन्दछन् जून, उनिहरुको सनातन संस्कारको जरासम्म ज्ञान र दृष्टि नपुग्नुको उपज हो । परम्परालाई न्याय दिन शास्त्रको गलत व्याख्या गरिनु नै सनातन सस्कारको दुर्भाग्य हो ।
महिनावारीको समयमा हिँडडुलमा अफ्ठेरो हुने अनि संक्रमण ईत्यादिको संभावनाले अरु समयको तुलनामा सकेसम्म बिहार नगर्न भनें सुझाव दिइएको छ तर ती सुझावहरु अशुद्धताका रुपमा भनें गलत व्याख्या गरिनु दुर्भाग्य हो ।
भगवानको भाषा अनि नजरमा महिला र पुरुषलाई असमान अधिकार र स्वतन्त्रता नभएको कुरा
त बेदहरुले नै प्रष्ट पारेका छन् ।
क्रृगवेदमा १०। १९१। ३ मा प्रष्ट लेखिएको छ पुरुष र स्त्री दुबैलाई बरावर रुपमा प्रगती गर्नकालागि सम्पूर्ण मन्त्रहरु प्रदान गरिएको छ । क्रृगवेदमा ३।३१। १ मा प्रष्टसँगले बूवाको सम्पतीमा छोरा र छोरीको बरावर हक हुने भन्ने पनि उल्लेख छ, नेपालमा सम्पतीको समान हकको कानुन पारित भएको हालसालै न हो । बेदलाई गलत अर्थ लगाएर धेरै पक्षहरुको आफुशुखी व्याख्या गरिएको प्रमाण यो पनि एउटा हो ।
रजस्वालाको समयमा यौन सम्पर्क बन्देज गर्न भनि यर्जूवेदको तैत्रिय सहिंताको श्लोक २।५।१ मा भनिएको पाइन्छ । बास्तवमा महिनावारीको समयमा यौन सम्पर्क बैज्ञानीक र यौन स्वास्थका हिसाबले पनि राम्रो
मानिदैन, यस कुरामा त आधुनिक बिज्ञान र बेद दुबै एकै तर्कमा छन्, हैन र ?
सानो उदहारण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहयौं
आर्यूवेदले पनि प्रत्यक महिलाले हरेक महिना महिनावारीको रगतका रुपमा बिकार पदार्थहरु निष्काषन गर्ने भएकाले उनिहरु सामान्यतया पुरुष भन्दा धेरै बाँच्ने बताएको छ ।
मनुस्मृतीलाई यहाँ प्रस्तुत र्न चाहयौं, हुन त मनुस्मृतीलाई वेदको भाग मानिँदैन तथापि सनातन जीवनशैलीको प्रतिबिम्ब मनुस्मृतीले गज्जबले गरेको छ ।
जहाँ जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ मात्र देवताको वास हुन्छ । नत्र जहाँ नारीको सम्मान छैन त्यहाँ गरेका कुनै पनि क्रिया फलदायी हुनेछैन् ।
रजस्वाला या अन्य कुनै पनि कुराका आधारमा नारीहरु माथि गरिने भेदभाव निकृष्ट छ । बेद या उपनिषद हरेक तर्फ यस्ता कुराहरुलाई दुरुत्साहित गरिएको छ । रजस्वालालाई त आयूवेदले चन्द्रमानसंग पवित्र तुलना गरेको छ , स्मरण रहोस् चन्द्रमान पनि २८ दिनको हुन्छ भनें रजस्वाला चक्र पनि २८ दिनकै हुन्छ ।
रजस्वालाको पवित्रताको कदर गरियोस् अनि र शास्त्रको झुठो खोल ओढेर भेदभाव र छुवाछुत बन्द होस् । देशको कानुन र ग्रन्थहरुले पनि यही भन्दछन् ।